Car Care အရည်အရည်သားရေပြုပြင်ရေးကိရိယာ - အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အခွန်လုံးဝမယူပါ WoopShop®
Car Care အရည်သားရေပြုပြင်ရေးကိရိယာ
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်နိုင်ငံ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စပိန် ရုရှားပြည်ထောင်စု ပြင်သစ်
အရောင် ညိုသော ဆန်ဖြူ အညိုရောငျရငျ့ အလင်းကိုဘရောင်းက Beige Brown စပျစ်ရည်ကိုနီ အဖြူ Black က မီးခိုးရောင် အဝါနုရောင်ရှိသော အသီးအစိမျးရောငျ သားရေပြုပြင်ခရင်မ်
တရုတ် / ဘရောင်း ယူနိုက်တက်စတိတ် / ဘရောင်း စပိန် / ဘရောင်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ဘရောင်း ပြင်သစ် / ဘရောင်း တရုတ် / ဆန်ဖြူ ယူနိုက်တက်စတိတ် / ဆန်ဖြူ စပိန် / ဆန်ဖြူ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ဆန်ဖြူ ပြင်သစ် / ဆန်ဖြူ တရုတ် / အမှောင်ဘရောင်း ယူနိုက်တက်စတိတ် / အမှောင်ဘရောင်း စပိန် / အမှောင်ဘရောင်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အမှောင်ဘရောင်း ပြင်သစ် / အမှောင်ဘရောင်း တရုတ် / Light Brown ယူနိုက်တက်စတိတ် / Light Brown စပိန် / Light Brown ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / Light Brown ပြင်သစ် / Light Brown တရုတ် / Beige ဘရောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / Beige Brown စပိန် / Beige Brown ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / Beige Brown ပြင်သစ် / Beige ဘရောင်း တရုတ် / ဝိုင်နီ ယူနိုက်တက်စတိတ် / ဝိုင်နီ စပိန် / ဝိုင်နီ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ဝိုင်နီ ပြင်သစ် / ဝိုင်နီ တရုတ် / အဖြူ ယူနိုက်တက်စတိတ် / အဖြူရောင် စပိန် / အဖြူ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အဖြူရောင် ပြင်သစ် / အဖြူ တရုတ် / Black က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / လူမည်း စပိန် / လူမည်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / Black က ပြင်သစ် / လူမည်း တရုတ် / မီးခိုးရောင် ယူနိုက်တက်စတိတ် / မီးခိုးရောင် စပိန် / မီးခိုးရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / မီးခိုးရောင် ပြင်သစ် / မီးခိုးရောင် တရုတ် / Beige အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / Beige စပိန် / Beige ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / Beige ပြင်သစ် / Beige တရုတ် / အသီးအစိမ်း ယူနိုက်တက်စတိတ် / အသီးအစိမ်း စပိန် / အသီးအစိမ်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အသီးအစိမ်း ပြင်သစ် / အသီးအစိမ်း တရုတ် / သားရေပြုပြင်ရေးကရင်မ် ယူနိုက်တက်စတိတ် / သားရေပြုပြင်ထုတ်လုပ်သောခရင်မ် စပိန် / သားရေပြုပြင်ရေးကလိမ်းဆေး ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / သားရေပြုပြင်ခရင်မ် ပြင်သစ် / သားရေပြုပြင်ရေးကလိ
ကားစောင့်ရှောက်မှုအရည်သားရေပြုပြင်ရေး Kit - China / Brown backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အထူးအင်္ဂါရပ်များ - ဖြည့်စွက်အရောင်များ (ဖိနပ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ဆိုဖာများ၊ သားရေများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်)
item အကျယ်: 5cm
ပစ္စည်းအမျိုးအစား - ကားထိုင်ခုံများအတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊
ပစ္စည်း Volume ကို: 50ML
ပစ္စည်းအမည်: သားရေ Recoloring Balm
ဖြည့်စွက်အရောင်ငါးပိ: 11 အရောင်များ (1PCS optional)
အတူတူသုံးနိုင်ပါတယ်: 1PCS သားရေပြုပြင်မုန့်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်အရောင်ငါးပိကိုသုံးပါ
ကားထိုင်ခုံများ၊ အပိုဆောင်းအရောင်များ (ဖိနပ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်များ၊
သားရေအသုံးအဆောင်များကိုရေရှည်အသုံးပြုခြင်းသည်မှောင်နေခြင်း၊ ညှိုးနွမ်းခြင်းနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်ပါတယ်။ သားရေထုတ်ကုန်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်အရောင်နှင့်ဖြည့်စွက်ထားသည်
အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောပစ္စည်းများနှင့်သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ အသုံးပြုမှုအပြီးတွင်ခြစ်ရာချွတ်ယွင်းချက်လုံးဝမရှိတော့ပါ။ ဖြည့်စွက်အရောင်ပြီးနောက်, ကမှေးမှိန်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံရန်မလွယ်ကူသောအသစ်သောကဲ့သို့ဖြစ်၏။
သားရေပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကားထိုင်ခုံမျက်နှာပြင်ဖြည့်စွက်အရောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ပလတ်စတစ်သို့မဟုတ်ခဲယဉ်းသည့်မျက်နှာပြင်ကဲ့သို့သောကားအလှဆင်ခြင်းနှင့်ကူရှင်ချုပ်၊ ပရိဘောဂ၊ သားရေဂျာကင်များနှင့်အဝတ်များ - ဆိုဖာများ၊ ဆိုဖာများ၊ ကားပြားများ၊ ထိပ်များ၊ ဒိုင်ခွက်များ၊ လှေထိုင်ခုံများ၊ , အိတ်, အဝတ်နှင့်ကော်ဇော
စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ - သားရေကိုသုတ်ရန်နို့စို့ရောနှောထားသောနို့စို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူပြီးနူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေသည်။
1X ဖြည့်စွက်အရောင်ငါးပိသို့မဟုတ် 1X Repair Cream (ဝယ်ယူရန်အကြံပြုပါသည် 1x ပြုပြင်ရေး Cream နှင့် 1 x သငျ့လျြောသော ဖြည့်စွက်အရောင်အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုငါးပိ, အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းလိမ့်မည်)
အံ့သြစရာပဲ! ကျိုးသွားတဲ့သားရေထိုင်ခုံကိုပြင်လိုက်ပါတယ် သငျသညျဒဏ်ငွေစက္ကူနှင့်အတူပြီးပါက, တူညီတဲ့အရောင်ရှိလိမ့်မည်။
18.10 အမိန့်, 25.11 ၏အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သေးငယ်တဲ့၏ပြွန်ပျက်စီးမဟုတ်, ရုပ်ရှင်သို့ရောက်ကြ၏
Minsk သို့အစာရှောင်ခြင်းပို့ဆောင်ခြင်း လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်။ ကောင်းစွာထုပ်ပိုး ငါမစမ်းသေးဘူး